15 min Lyon iziko Bed Cozy Umbala - I-Airbnb
15 min Lyon iziko Bed Cozy Umbala
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMathieu
Xa iyi-385 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMathieu iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Imibalabala entle kwiflethi entsha inokuthatha abantu aba-1 okanye aba-2 abathe cwaka bekumgangatho we-15 imizuzu ukusuka kumbindi we-Lyon transit House. C24 ibhasi ezantsi kwibhloko. Konwabele ukupheka kunye nebalcony ejonge ngasentshona.
Indawo yam yiFrancheville bel air kwindawo ezolileyo kakhulu ye-15 imizuzu ukusuka edolophini yaseLyon gated entsha.
Indawo yokuhlala ifumaneka kwiimitha ze-50 ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi ukuya kumgca we-C24 ohamba ukusuka kwi-5am ukuya kwi-1am ukuya ngqo kumbindi weLyon ngaphantsi kwe-20 min.
Ibekwe ngokufanelekileyo kwibhajethi efuna ukuba seluxolweni kunye nentuthuzelo ebalulekileyo ngelixa isondele kakhulu eLyon kunye nokuthutha kunye nokufikelela kwiziseko zomgwaqo omkhulu.
Ngaphambi kwesakhiwo kukho i-supermarket encinci (evulekile 7/7 6h ukuya kwi-22h), i-takeaway yaseTshayina kunye ne-bakery.
Ukufikelela ngokulula kunye nokumisa ibhasi kwiimitha ezingama-50 ukusuka kwisakhiwo kunye nokupakisha kwasimahla ecaleni kwesakhiwo.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela lanamhlanje kunye negumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini 140 kunye neTV kunye nekhompyuter efikelelekayo ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho i-balcony enkulu yokuphumla.
Ubonelelo lwabucala I-WIFI, ilinen kunye neetawuli zinikezelwe. Isidlo sakusasa esilungileyo xa sifunwa.
Ke yiva owona mgangatho ubalaseleyo / umlinganiselo wexabiso eLyon.
Ndiphendula ngokukhawuleza kwizicelo
I-wifi ekhawulezayo – i-385 Mbps
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Netflix
4.42 out of 5 stars from 255 reviews
4.42 · Izimvo eziyi-255
Indawo ibekwe kwindawo efanelekileyo kwabo bafuna ukuza eLyon ngemoto okanye ukupaka ilula kwaye isimahla kwaye unqanda iminqwazi yaseLyon okanye usendleleni apho isikhululo sebhasi sisezantsi kwendawo yokuhlala. Le bhasi ikuthatha imizuzu eli-10 ukuya kwisikhululo se-metro throat wolf ikuvumela ukuba uye ngqo kumbindi weLyon.
Ndisesandleni sakho ngolwazi lwabakhenkethi. Kodwa neyona ndlela ilungileyo yokonwabela isixeko sethu esihle ngaphandle kokwaphula ibhanki (izithuthi, ukutya, njl..)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Francheville